Wii U, console lalao tonga lafatra ho an'ny lalao Retro sy Raspberry Pi | Fitaovana maimaim-poana
Wii U, console lalao tonga lafatra ho an'ny lalao video Retro sy Raspberry Pi
Amin'ny fomba ofisialy, Wii U dia iray amin'ireo tsy fahombiazan'ny Nintendo malaza indrindra. Taorian'ny fahombiazan'ny Wii, Wii U dia tsy nahavita nanaloka akory ity console lalao video ity tamin'ny resaka varotra sy fahombiazana, izay midika fa amam-bolana dia najanona ny lalao console ary ny lalao video dia zara raha manana an'ity maodely ity. Vaovao ratsy ho an'ny mpampiasa azy io, raha tsy hoe mpankafy ny Fitaovana Fitaovana Maimaimpoana.
Mpampiasa iray antsoina hoe Banjokazooie no nandefa torolàlana hanovana ny Wii U ho konsol Retro matanjaka noho ny Raspberry Pi. Ity fanovana ny console ity dia mahaliana satria tsy mila casing vita pirinty na tariby misy ifandraisany amin'ny console amin'ny outlet misy herinaratra.
Ny tetik'asa dia tsy vitan'ny feno fa voasedra ary mandeha tsara. Izany ihany no ilaintsika konsol Wii U, tabilao Raspberry Pi 3 ary singa elektronika sasany izay hitantsika amin'ny fivarotana elektronika an-tserasera. Raha vantany vao manana ireo sombin-kazo ireo isika dia mila manohy fotsiny ny mpitari-dalana fananganana.
Ilaina ny mandinika ny tari-dalan'ny Pi-Power, tetikasa iray amin'ny Githoba izany dia hanampy antsika hatanjaka ny solaitra mba hiasa ho toy ny console lalao tsy misy tariby. Raha ny momba ilay rindrambaiko, mazava ho azy, RetroPie no ampiasaina, rindrambaiko iray ahafahantsika mihazakazaka emulator lalao console ary koa lalao ho an'ireo konsol ireo.
Ny tetik'asa Wii U mod dia mihoatra ny fampiasana indray ny akorany, toy ny ny Raspberry Pi dia hifandray amin'ny seranana tsirairay sy ny fibaikoana ny Wii U, mijery ny zava-drehetra amin'ny efijery 6,5-inch. Ka amin'ny fotoana maharitra, ity fanovana ity dia mety ho mora kokoa sy mahaliana kokoa noho ny tetikasa lalao console hafa Retro. Raha tsy jerena ireo lalao video hananan'ny console amin'ny fanovana ity, isa lehibe kokoa sy feno kokoa noho ny katalaogan'ny Wii U. Mazava ho azy, ity fanovana ity dia mameno ny fiainana an'ity lalao Nintendo lalao ity. Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Raspberry Pi » Wii U, console lalao tonga lafatra ho an'ny lalao video Retro sy Raspberry Pi
RaspAnd mametraka Android amin'ny Raspberry Pi
Volocopter dia mahazo famatsiam-bola vaovao 25 ​​tapitrisa euro